Iikhompyutheni zekhompyutha kunye nomsebenzi wazo kwi-Computer Networking
Internet kunye neNethiwekhi Iingcamango ezibalulekileyo
by UBradley Mitchell
Iikhompyutheni zekhompyutha ziyimpawu ebalulekileyo kuzo zonke iikhompyutha. Iiprojethi zekhompyutha zibonelela ngefowuni kunye neziphumo ezifakela kuyo ifowuni idinga ukunxibelelana neeripheriti kunye namanethiwekhi ekhompyutha. Iibhanki ezibaluleke kakhulu kwiikhomputha zisetyenziselwa ukuthungatha iikhompyutha.
Ichwethi ingaba yimizimba okanye iyinqobo. Izixhobo zokunxibelelanisa izixhobo zendawo zivumela ukudibanisa iikhompyutha kwiikhomputha, ii-routers , iimodem kunye nezinye izixhobo zepheripher. Iintlobo ezahlukeneyo zeechwep ezibonakalayo kwi-computer ye-hardware ye-computer ziquka:
Amachwep e-Ethernet : Amanqaku oxilongo obunemibala yee- Ethernet
Iikhompyutha ze-USB : Amacandelo oxhumo oluxubileyo lwee-USB
Amanxweme angama-serili: Amanqaku okuxubile ajikeleze ukujikeleza kwezixhobo ze-serial
Izibuko kwi-Intanethi ye-Wireless
Nangona amanethiwekhi ekhompyutheni anamathele axhomekeke kwiichwepheko eziphathekayo kunye neencingo, amanethiwekhi angenazintambo azidingi. Iinqununu ze-Wi-Fi, umzekelo, sebenzisa iinombolo zeseshishini ezimele iifowuni zokubonisa izerediyo.
Iipropathi ezintle ziyinxalenye ebalulekileyo ye- Intanethi ye-Intanethi (IP) . Ezi zibuko zivumela izicelo zeekhompyutha ukuba zenze izabelo ze-hardware ngaphandle kokuphazamisana. Iikhomputha kunye nee-routers zilawula ngokuzenzekelayo ukuthutha kwendlela yezithuthi ezihamba ngeeports. Izixhobo zomlilo zomnxeba zongeza ukubonelela ukulawula ukuhamba kwetransti kwichwephethi nganye ebonakalayo ngenjongo yokukhusela.
Kwi-intanethi ye-IP, ezi zibuko ezibonakalayo zibalwa 0 ukuya ku-65535. Ngaphezulu, jonga Yintoni Inombolo yePort?
Iingxaki kunye neePorts kwi-Computer Networking
Amachwephelo angamaziko angayeka ukusebenza ngenxa yezizathu ezininzi. Izizathu zokungaphumeleli kwezibuko ziquka:
Amandla enamandla (amacebo axhunyiwe kumandla kagesi)
Ukulimala okubangelwa zizikhonkwane ezivela kwizixhobo (ezibangelwa ngokufaka iimbambo ngamandla, okanye ngokuzama ukucoca uhlobo olungafanelekileyo lwekhefu kwichweba).
Ngaphandle komonakalo kwizikhonkwane, ukuhlolwa ngokwenyama kwehardware yechwethi akuyi kufumana nantoni na ephosakeleyo. Ukungaphumeleli kwefayile enye kwidivaysi ye-multiport (njenge- router network ) ayichaphazeli ukusebenza kwezinye iirhweba.
Isantya kunye nenqanaba leenkcukacha zesitofu senyama asinakunikwa kuphela ngokuhlolwa komzimba. Amanye amadivaysi e- Ethernet , umzekelo, asebenze kuma-100 Mbps , ngelixa ezinye zixhasa i- Gigabit Ethernet , kodwa isixhobo somzimba siyafana nazo zombini. Ngokufanayo, abanye abaxhamli be-USB basekela inguqulo ye-3.0 ngelixa abanye baxhasa kuphela ii-2.x okanye ngamanye ama-1.x.
Umngeni oqhelekileyo ngumntu ojongene namachweba angqalileyo ukhuseleko lwenethiwekhi. Abahlaseli be-Intanethi bahlalutya rhoqo iipropathi zeewebhusayithi, ii-routers, nakwezinye iisango zethungelwano. I- firewall yenethwekhi inceda kakhulu ukulinda ezi hlaselo ngokunciphisa ukufikelela kumachwebeni ngokusekelwe kwinani labo. Ukuze kusebenze ngempumelelo, i-firewall ivame ukuba yinto engapheliyo kwaye ngamanye amaxesha uvimbele umzila umntu afuna ukuwuvumela. Izindlela zokuqwalasela imigaqo yokuba umlilo usetyenzise ukuqhutyelwa kwezithuthi njengoko kufana nemithetho yokuthumela iiprop ingaba nzima kakhulu kubabengeziprofesenti ukulawula.
Ukusebenzisana neNobhala yeBhinary neHexadecimal Numeri
Iileta ze-OSI Model Illustrated
I-Cisco SG300-28 Iphasiwedi engapheliyo
Isingeniso kwiiNkcukacha zeeNkcukacha zeKhompyutha
I-X10 I-Home Automation Systems kunye ne-Software
Indima yeeKompyuta zeeKhompyutha kwiNethwekhi yeNtlalo
Yintoni i-Bluetooth Wireless Networking?
I-NAT: Idilesi yeNxibelelwano lweNethwekhi
Hlala uxhumeke apho uhamba khona kunye neRudter yokuhamba
Iindaba ezivela kwimida yeBorderlands: Ubalekele i-Plan Bravo PS4
Ukufumana i-TiVo MAK yakho (I-Key Access Access)
Funda iNgcaciso ye 'Pwned' kunye nendlela yokuSebenzisa ngokufanelekileyo
Funda nge-Adobe InDesign Eyedropper kunye neZiko lokulinganisa
Indlela yokufumana ii-IncrediMail Folders ezidlulileyo
Ukwahlukahlukana kweCaxial and Optical Digital Audio Cables
Ukufaka abaxhasi kwiLizwi
Iimidlalo eziPhambili zoBulungisa kwiPC
Ngaba ufuna i-GPS Antenna?
I-AIM Imeyili kunye ne-AOL Mail Ikhonkco ye-imeyile Isiqingatha somlinganiselo
Indlela yokuvula i-imeyile kwi Window yayo kwi-Gmail
Uluhlu olupheleleyo lwe-Top Mobile Web Browsers
I-Budget Best Best 7-Friendly Receivers Receivers Yokuthenga ngo-2018
Funda indlela yokuchonga nokukhusela iiVilus ezenza iifayile zakho zifezekise
I-Presentation yakho yokuqala yePowerPoint
Indlela yokuqwalasela i-PHP ukusebenzisa i-Local Mail Server yokuthumela iMeyili
I-Minecraft Merchandise Ukugcina Ufudumala (kunye Nokuba Uthengeke!)
I-Pacific Rim: Ukubuyiselwa koMdlalo weVidiyo (XBLA)
Iindlela ezi-5 zokufumana indawo kwisixhobo sakho se-Android
Indlela yokwakha nokugcina i-Intanethi yaseKhaya eyiNtle